Madaxweynaha dalka Tanzania oo la filayo in booqasha uu ku imaado dalka – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweynaha dalka Tanzania oo la filayo in booqasha uu ku imaado dalka
Madaxweynaha dalka Tanzania John Pombe Magufuli ayaa la filayaa in booqasha laba maalin qaadaneysa uu ku imaado dalka laga bilaabo maalinta Isniinta ah ee Isbuuca dmabe.
Warar hoose oo laga helayo dowlada ayaa sheegayaa in socdaalka Magafuli uu ku qotoma sidii dalkani Kenya uu ogala xaajon lahaa sidii Wasiirada arimaha dibada ee Amina MOmhamed loogu dooran lahaa xilka sare ee midowga Africa.
Walow ila waredyo lagu kalsoonaan karo laga soo xigtay imaansha Madaxweynaha Tanzania balse dowlada dalka ayaa ilaa iyo hadda si ramsi ah u shaacin arintaasi.
Iyado waxyaabaha ugu muhiimsan madaxweynaha Tanzania uu kala hadli doono dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta ay tahay sidii Amina Mohamed xilka Gudoomiyenimo ee AU-da u heli laheed hadana waxaa jiro arimo kale oo ay labadan masa’uul kawada xaajoon doonaan oo ku aadan xiriirka labada dowladood.
Booqashada John Magafuli uu ku imaanayo dalka ayaa noqoneysaa tii ugu hreysay tan iyo markii xilkaas loo doortay bishii Ocotober ee sanadkii aynu soo dhafnay ee 2015-kii.
Madaxweynahan ayaa la sheegay in uu yahay mid si aad ah ooga badalan Madaxweynayaashii soo maray wadanka Tanzania iyo guud ahaan qaarada Africa maadama la arkayay in uu booqasha kutago goobo aan horay loo shaacinin.
Tani ayaa ka dhigeysay in uu islamarkiiba shaqada katiro shaqsiyadka uu u arko in sidii la rabay aysan shaqadooda ooga soo bixin.
← Walaac laga muujinayo bukaan shalay ku geeriyoday Isbitalka Bungoma xili uu saf dheer ku jiray
Fadeexada lacagta laga lunsaday wasaarada caafimadka oo waji cusub yeeshay →